Kunyora kuri nyore neIOS 11 uye iyo imwechete-ruoko keyboard | IPhone nhau
Kunyora kuri nyore neIOS 11 uye iyo imwechete-ruoko keyboard
Tanga tichitaura nezvazvo chii chitsva muIOS 11 kubvira WWDC yakakosha Muvhuro wapfuura asi chokwadi ndechekuti kune akawanda uye kuchine zvakawanda mberi kumberi kwekuburitswa kwayo zviri pamutemo, izvo zvatinoda. Uye imwe yeaya matsva ayo achagamuchirwa kwazvo nevazhinji vashandisi iri Imwe-ruoko khibhodi mode muIOS 11.
Kunyora pachiratidziro cheiyo iPhone kana chero imwe smartphone haina kumbobvira yakanyatsogadzikana nekuda kwezvikonzero zvehukuru. Uye nema skrini makuru, chingave kuvandudzwa kwakava chirema: vazhinji vashandisi vanomanikidzwa kushandisa ese maoko kunyora. Asi NaIOS 11 tinogona kunakidzwa nehukuru hwakazara keyboard iyo yatinogona zvakare kushandisa neruoko rumwe.
Imwe-ruoko khibhodi, yakapusa asi inobatsira uye zvakare yakachengeteka
Sezvatakataura, pama iPhone madhizaini ane 4,7 uye 5,5-inch skrini, zvinonetsa kunyora neruoko rumwe chete pane pa iPhone SE kana zvimwe zvakafanana ne4 XNUMX skrini, kunyanya kune vedu vane maoko mashoma. Saka, vanhu vazhinji vanomanikidzwa kushandisa maoko ese pese pazvinogoneka, zvakanyanyisa kuitira kuti mudziyo usazopedzisira wapunzika paasphalt patinoedza kusvika, pasina kubudirira, kiyi iri kurudyi kukona yakatarisana. Takatarisana nekusagadzikana uku takaona zvimwe zvikumbiro kubva kune vavaki vechitatu-bato, zvakadaro izvozvi Iyo Apple pachayo inotipa mhinduro yakabatanidzwa muiyo iOS 11 inoshanda sisitimu pachayo, yakapusa uye yakananga sekuti, sezvingabvira, inoshanda.
Kugadzirisa dambudziko iro rakakura screen screen ye iPhone yavo inofungidzira vanhu vazhinji kana vachinyora mameseji kana kunyora chero imwe mhando yemavara, Apple yakaisa mune yekutanga beta vhezheni yevagadziri veIOS 11 a keyboard nyowani-ruoko, chimwe chinhu senge «ruoko rwemo ruoko» izvo chaizvo inotibvumira kusundira iyo keyboard kuruboshwe kana kurudyi kwescreen, zvinoenderana nekuti tichaishandisa neruoko rumwe here kana rumwe, kuita kunyora uchishandisa chete chigunwe cheruoko rumwe nyore. Mune mamwe mazwi, iyo nyowani nyowani inowirirana nevose vari kurudyi-ruoko uye kuruboshwe-ruoko.
Sezvauri kuona mumawindo ezvidzitiro atakatora muActualidad iPhone, kwatatove kubva Muvhuro kuyedza dzese nhau dzeIOS 11 pamafoni edu eApple nePadad, kushandisa keyboard neruoko rumwe chete kuri nyore.
Isu tinokwanisa kuwana iyi nyowani keyboard chero nguva uye kubva kune chero chishandiso, sekureba seiri iyo programu inobvumidza kutumira mameseji (WhatsApp, Teregiramu, Meseji, Ulysses, Shoko, Mapeji, nezvimwewo). Kune izvi zvichave zvakakwana ne bata uye bata munwe wako pachiratidzo chenyikakana izvo zvinotipa mukana wekuenda kumakhibhodi atakaisa uye, kubva ipapo, sarudza imwe yesarudzo dzekhibhodi neruoko rumwe mumenu iripo, yakatarisa-kuruboshwe kana kurudyi-yakatarisana.
Kune avo venyu vasati vaedza iyo iOS 11 beta, uye kukupai zano, Imwe-ruoko khibhodi yakaenzana saizi kune iyo keyboard pane ina-inch iPhone, saka izvozvi zvichave nyore kunyora, kunyangwe zvisingazombove nyore senge pane yakazara yakazara keyboard senge iyo Magic Khibhodi kana iyo iPad keyboard.
Nekudaro, nekhibhodi nyowani-ruoko, hazvizove zvakakosha kutambanudza munwe zvakanyanya kusvika kune mamwe magumo uye nekudaro, njodzi yekuti iPhone yedu inogona kuperera pasi ichatapudzwa.
Kunge kumwe kuvandudzwa kwakapfuura, zano rakafanana chaizvo neiyo tweak inowanikwa yemidziyo yevasungwa OneHandWizard.
Sezvaungave iwe watoona kare, izvo zvitsva zveiyo iOS 11 zvakawanda, zvese pa iPhone uye pane iyo iPad, uye kwete chete padanho rekugadzira, asiwo mashandiro. Iyo-ruoko-ruoko keyboard iri yakapusa asi inobatsira ruzivo, iwe unofungei?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Kunyora kuri nyore neIOS 11 uye iyo imwechete-ruoko keyboard
Izvo zvinoda kuona kuti bhatani rine sarudzo kune compact kiyipiki iri kunze kwekusvika kweruoko iyo iyo keyboard yaderedzwa. 🙂
Ndakagadzirisa kuIOS 11 uye sarudzo iyi hairatidzike iripo! Zvinoshamisa zvakadii, ndine mashanu akabhobhodhi akaiswa, uye pakudzvanya iyo «nyika» kiyi, iyo kiyi haionekwe munzvimbo nhatu.
Hi Sandra, unofanira kubata "world" kiyi, kwete kungoibata. Uchaona kuti zvinoratidzika sei kwauri. Shuwiro yakanakisa!
Ini ndinoona iyi sarudzo isingabatsiri sezvo saSandra ini zvakare ndine akati wandei makiboad akaisirwa, zvisati zvave nyore kwandiri kuti ndichinje kubva kune mumwe mutauro ndichienda kune mumwe manje pese pandinenge ndichida kuchichinja ndakakanganisa kuramba ndichipinda seyokutanga kiyibhodhi potion ku kurudyi kana kurudyi kuruboshwe zvinotsamwisa, ndinoda kuziva kana paine sarudzo yekubvisa, ndatenda ...
Mune mawonero angu, iyi sarudzo haina basa nekuti saSandra ini zvakare ndine akati wandei makiboad akaisirwa, zvisati zvave nyore kwandiri kuti ndichinje kubva kune mumwe mutauro ndichienda kune mumwe ikozvino nguva dzese dzandinoda kuchichinja, ndakanganisa kuramba ndichiisa iyo keyboard sekuti mushonga wekutanga kurudyi kana kuruboshwe unotsamwisa, ndinoda kuziva kana paine sarudzo yekubvisa, ndatenda ...
Chikamu chekutanga chePlanet yeApplication chave kuwanikwa paApple Music